आभूषण वेबसाइटहरूको लागि उत्तम एसईओ अनुकूलन के हो?
जस्तै तिनीहरू भन्छन्, शुरुवात सधैं गन्दा हुन्छन्. त्यहाँ कुनै इन्कार छैन कि अनलाइन गहना व्यवसाय स्थापना गर्नु चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ. सौभाग्य देखि, त्यहाँ केहि एसईओ अप्टिमाइजेसन सुझावहरू छन् जुन तपाईं अगाडी प्रतिस्पर्धा खडा गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र अधिक गहना अनलाइन बेच्न सक्नुहुन्छ. ती सुझावहरू फेला पार्न स्क्रोल गर्नुहोस्.
आभूषण अनलाइन बेच्नका लागि उत्तम एसईओ अनुकूलन विचार
एक महान वेबसाइट सिर्जना गर्न को लागी फोकस
पहिलो कुरा धेरै इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरू ध्यान दिन्छन् जब नयाँ साइटमा जानुहोस् यसको डिजाइन हो. कुशल वेब डिजाइन सामान्यतया क्याप्चर गर्ने र तपाइँको सम्भावनाको ध्यान राख्ने कुञ्जी हो. त्यसकारण, गहना साइट स्थापना गर्दा, तपाईंको स्रोत प्रयोगकर्ताहरू र खोजी इञ्जिनहरू अपील गर्न निश्चित छन् भनेर सुनिश्चित गर्नुहोस्. तपाईंको गृहपृष्ठको साथ सुरू गर्नुहोस्. याद राख्नुहोस्, यदि तपाइँ आगामी आगन्तुकहरू भेट्टाउन सक्नुहुनेछ भने तिनीहरू त्यहाँ जानुहुन्छ, तपाईं त्यहाँ आधा बाटो हुनुहुन्छ. रङ प्यालेट, चित्र, ग्राफिक्स, लोगो, प्रतीक, पेजको सम्पूर्ण डिजाइनको रूपमा पूर्णताहरूलाई त्यस्ता तत्वहरू ल्याउनुहोस्. तपाईंको आगन्तुकहरूमा शक्तिशाली भावनात्मक प्रभाव उत्पादन गर्न फोकस गर्नुहोस्. यस्तो आयको पछि तपाईको राजस्व सुधार गर्न आवश्यक छ.
गुणस्तर को फोटो लिनुहोस्
सबैलाई चित्रहरु लाई प्यार गर्दछ. तपाईंको गहनेको उच्च गुणस्तर चित्र एक सफल वेबसाइट SEO अनुकूलन को एक अभिन्न भाग हो. यो स्पष्ट छ कि यदि तपाईंको तस्विर खराब गुणस्तर हो भने, कम मौका छ कि मान्छे तिनीहरूलाई खरीद गर्न चाहान्छ. निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको छविहरू फोकसमा छन् र धेरै धेरै प्रतिबिम्ब बिना. यो अत्यधिक सल्लाहकार छ कि तपाई एक पेशेवर व्यवसायिक फोटोग्राफ लिनुहुन्छ जसले स्थानीय कामदार वा टाढाको व्यवसायमा टाढाको काम गर्न माहिर गर्दछ.
विकल्पहरु संग आगन्तुक प्रदान गर्नुहोस
अनलाईन बेचन को एक प्राथमिक नियम प्रयोगकर्ता को विकल्प दिनुहोस. यसमा श्रृंखला लम्बाई, गहने धातुको राजा, मणिको रंग, सेटिङको प्रकार र लाइन मा जान सकिन्छ. विचार गर्नुहोस् कि कसैले कुनै वस्तु उपहार लिपि वा निर्दिष्ट ठेगानामा डेलिभर गरेको छ. ग्राहकहरू विकल्पहरू प्रदान गरेर, तपाई केवल उनीहरूको खरिद अनुभव बढ्नेछ तर तपाईंको बिक्रीलाई पनि सुधार पुर्याउँदछ.
सामाजिक साझेदारी मन्त्रालय
सामाजिक साझेदारी लगभग व्यापारको कुनै पनि प्रकारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउँछ।. यसकारण, यो सिफारिस गरिएको छ कि तपाईंले सोशल मिडिया साझा अभ्यास अभ्यास गर्नुहुने तपाईंको अनलाइन गहना व्यवसायमा. ती साझा साझेदारी बटनहरूले तपाईंलाई दुवैलाई प्रमोशन गर्न मद्दत गर्दछ: तपाईंको ब्रान्ड र तपाईंको गहना वेबसाइट. प्रत्येक साझेदारी तपाईंको वस्तुहरूको लागि नि: शुल्क विज्ञापनको रूपमा विचार गर्न सकिन्छ र ग्राहकहरूको लागि सोशल मिडिया सञ्जालमा उनीहरूको साथीहरूको सिफारिश. तपाईले जान्न सक्नुहुनेछ, साझेदारीहरू बिक्रीमा लाग्दछन्.
आफ्नो आभूषण पहनें
अजीब लाग्दछ तर यदि तपाईं गहने अनलाइन बनाउनुहुन्छ वा बेच्नुहुन्छ भने, तपाईले घर बाहिर. यो निःशुल्क विज्ञापन हो जसले संभावित ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्न मद्दत गर्नेछ. चाहे घटनाहरू, ग्यालरीहरू, काम वा भर्खरै हेरौं, तपाईंको गहनाहरू राख्नुहोस्. यो एक गहन र सजिलो तरीका हो जुन तपाईंको गहने साथीहरूलाई साथी, सहकर्मीहरू र परिवारलाई विज्ञापन दिन्छन्, साथसाथै ती मानिसहरू जुन सडकमा भेट्छन्।. तपाईं पनि एक कदम अगाडी बढ्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो साथीहरूलाई पनि आफ्नो उत्कृष्ट सृजनाहरू लगाउन सक्नुहुनेछ.
यी सबै भन्दा राम्रो एसईओ अप्टिमाइजेसन युक्तिहरू थिए जुन तपाईले तपाइँको गहना वेबसाइट उच्च स्तर निर्धारण गर्न आवेदन गर्न सक्नुहुनेछ. आशा छ, तपाईंले तिनीहरूलाई उपयोगी खोज्नुहुन्छ Source .